Uthando lumuzwa omuhle wokukhanya okungangabazeki owenza sibe ngcono. Kodwa, ngeshwa, inhliziyo ayikwazi ukulalelwa futhi ingathola ukuze owesifazane ahambe othandweni futhi aqale ubuhlobo nomuntu ongekho mahhala.
Kodwa lesi simo sinengqondo. Kungenzeka ukuthi lo wesifazane wayengazi ngakho ukuthi umnumzane unomfazi ofanelekile. Uphinde naively ukholelwa futhi wakha izinhlelo zekusasa lomndeni elikhanyayo. Futhi indoda ekhethwe yilo wesifazane, ungasheshi ukunikela. Uma iqiniso lingakapheli (futhi iqiniso livele liphumile - ngokushesha noma kamuva), khona-ke lona wesifazane uzwa umuzwa wokufutheka okukhulu nokukhashelwa. Ngakho umuntu uhlelwe - akekho othanda ukukhohlisa.
Owesifazane ohlakaniphile ocabanga ngekusasa lakhe uqonda ukuthi ubuhlobo obunjalo nomuntu oshadile buzophela ngokushesha noma kamuva. Cha, yebo, mhlawumbe naye wawela othandweni, wahlukanisa futhi uzothatha intombazane yenhliziyo ibe ngamakhosikazi asemthethweni. Kodwa ngokuvamile indoda ayifuni ngempela ukwephula isigqi esivele esisungulwe futhi esinezintandokazi zokuphila. Ngakho-ke, kungaba ngcono ukuthi owesifazane ayeke ubuhlobo bakhe nendoda eshadile. Akuwona wonke owesifazane, ngisho nangengqondo engavamile, ozonquma ukuhlukanisa nomuntu omthandayo. Eqinisweni, unikeze lokho, okusemthethweni. Kodwa amadoda akuzona izinto futhi ngokuqinisekile akuzona impahla yomuntu. Ngakho-ke, inkulumo ethi "nikela" kulokhu akuyona into efanele.
Singawaphula kanjani lobu buhlobo? Kunzima, Yebo, ukuqeda ubuhlobo nendoda eshadile. Phela, eqinisweni, owesifazane uyancika kuye, emihlanganweni kanye nokulindela njalo. Ngaphezu kwalokho, ubudlelwane obunjalo buyinto ekhethekile yokuzwa, ngoba nganoma yisiphi isikhathi ungafunda ngakho konke okuvela kumkakho futhi awukwazi ukugwema ukucaciswa okuvunguzayo kobudlelwane. Umuntu angathanda lokhu kuphila, agcwele i-adrenaline, kodwa namanje abesifazane abaningi bafuna ukuphila nokuthula komndeni.
Ukuze uqinisekise ukuthi ubuhlobo obunjalo nomuntu oshadile buphela, udinga ukukala zonke izinzuzo nezingozi. Noma kunjalo, kukhona omunye umndeni, futhi lo muntu wenza, okungenani, hhayi kahle. Owesifazane kufanele acabange ukuthi uzokwenza lokhu yini emva kwalokho? Phela, uma indoda eshadile ingaboni lutho olungenangqondo ekuhlangabezaneni nomunye ohlangothini, mhlawumbe, ngeke abone noma yini engalungile ngalokho okuzoshintsha kamuva futhi kuye.
Owesifazane kufanele ambheke ngokucophelela, kodwa ulungile? Ungumqambimanga, noma ngabe uyenzela omunye umuntu. Akafani ngokuthembeka emibangweni yomndeni, akunakwenzeka ukuthi uzoba umyeni omuhle. Owesifazane ohlangana nendoda yalolu hlobo kufanele aqaphele lokho akwenzayo futhi aqonde ukuthi ubhubhisa umndeni womunye umuntu futhi akhuthaze inkohliso nokungathembeki.
Uma uthola ukuthi umnumzane wakho akashadile ngokushesha, uma ucabanga ngokwengeziwe ukuthi ungumqambimanga ngaphambi kwakho futhi akunakwenzeka ukuthi ashintshe impilo yakhe. Ubudlelwano nabesilisa abashadile ngeke buholele empilweni evamile emndenini kanye nezingane. Noma yimuphi umuntu osevele ebeke umkhondo endleleni yokukhohliswa, kungenzeka ukuthi uzokhohlisa ngokwengeziwe.
Yiqiniso, kunezimo lapho kukhona uthando oluqinile ngempela oluzoholela emshadweni ojabulisayo. Kodwa, ngeshwa, lezi zimo azivamile futhi kungcono ukuvumela okhethiweyo wakho ahlukanise (okungukuthi, ukulungele ngokuphelele ukuguqulwa nokuvula ubudlelwane obusha) kunokuba oshadile uzokutshela njalo ukuthi uzokuhlukanisa.
Ubudlelwano nomuntu oboshiwe ngumshado kuyisihloko esingapheliyo. Kungenzeka ukuyeka ubudlelwano obunjalo, udinga nje ukufuna kakhulu iqiniso elilula: lowo owaqala ukukhohlisa uzoqhubeka enza lokhu ngisho nangaphezulu. Futhi-ke, kungenzeka ukuthi uzobe usendaweni yowesifazane okhohlisiwe.
Qala impilo kusukela ekuqaleni ngemuva kwesahlukaniso
Izingane ezindala, abazali bahlukanisile - indlela yokuphatha ngayo?
Ungasindisa kanjani umndeni esivumelwaneni esibucayi?
Ubuhle besilisa nabesifazane ngezikhathi ezahlukene
Indima yemikhiqizo ekuvikeleni isikhumba sethu elangeni
Izicathulo ezinomzimba nezithakazelisayo ngaphandle kwe-hairpin
Ukuqagela ngezizathu zekhofi - ukuchaza izimpawu nemidwebo
Indlela yokwenza manicure ekhaya
Yogurt nge uju
Ungashintsha kanjani impilo yakho ibe ngcono